FALANQEYN XASAASI AH: Maxay ka dhigan tahay Dib u doorashada Prof Max’ed Jawaari, Yeyse fariin u tahay? | PuntlandTimes-	Wednesday, February 22nd, 2017	Home
FALANQEYN XASAASI AH: Maxay ka dhigan tahay Dib u doorashada Prof Max’ed Jawaari, Yeyse fariin u tahay?
MUQDISHO(P-TIMES)- Mudanayaasha baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya ayaa maanta si toos ah u diiday kalmadda ISBEDEL, waxayna mar kale go’aansadeen in uu afarta sanno ee nagu soo beegan uu shir gudoon u ahaado Prof Maxamed Sh Cismaan Jawaari oo horey xilkan u soo hayey afartii sanno ee lasoo dhaafay.
Mudanayaasha baarlamaanka ayaa ku furmay tiradda Xildhibaanada 260 Xildhibaan, waxaana 141 kamid ah codkooda ku taageereen Gudoomiye Maxamed Sh Cismaan Jawaari.
Tanni waxay uga dhigan tahay baarlamaanka Soomaaliya in ay muujiyeen sida loogu baahan yahay in lasii wado howlaha Qabyadda ah, waxaana la dareemayaa in uu jiri karro soo laabashada Madaxda dawladda Faderaalka ee Soomaaliya.
Prof, Jawaari xogta uu helay Warsidaha Puntlandtimes.com ayaa xaqiijinaysay in uu Madaxweynaha dawladda Faderaalka Xasan Sheekh Maxamuud ee hadda musharaxa ah uu qeyb ka aha abaabulkiisa doorashada.
Jawaari ayaa ciyaaray ciyaar adag oo uu la dheelay Shariif Xasan Sheekh Aadan oo hadda kuqasban in uu noqdo Ole-oleeyaasha mid kamid ah ragga sida weyn u loolami doona todobaadyada nagu soo beegan.
Dib u doorashada Jawaari waxay ka dhigan tahay in ay jiri karaan fursado kale oo ay helaan Madaxdii horey u soo xukuntay dawladda Faderaalka afartii sanno ee lasoo dhaafay.
Waxay kaloo fariin u tahay musharaxiin badan oo gadaal ka riixayay Xidig & Geeseey, kuwaas oo ay maanta fariin cad u soo baxday, waxaana lafilan karaa arrimo badan oo dib iska saxa.
afhayenka gobolka mudug says:	January 11, 2017 at 2:44 pm	puntlandtime waad Ku mahdasantihin saad utabinaysan wararka. lkn waxan raba mesha qoralka ah ee Noqotay QABYAALADA== waxa loola jeeda QABYADA san filayo way khaldantay